भारत, एक केटा जन्म भएको थियो स्पाइडर: तथ्य वा मिथ्या?
स्वास्थ्य, विकलांग मान्छे
"भारत मा एक केटा जन्म भएको थियो स्पाइडर!" - यस्तो शीर्षकहरू केही वर्ष पहिले दक्षिण एशिया मा सबै प्रकाशनहरू भयो कि। र यो यस्तो घटना वास्तवमा भयो किनभने, पहेलो प्रेस छैन।
यो भारत मा, एक केटा जन्म स्पाइडर थियो त्यो सत्य हो?
सुरुमा कुनै एक यस्तो घटना वास्तवमा उत्पन्न गर्न सक्ने विश्वास गरे। तर कागजात पहिलो फोटो बच्चा थिए पछि, सबै शङ्का बेपत्ता छन्। तब देखि, यो एकदम केहि वर्ष भएको, तर यो केटा अझै पनि सबै लेख्न र भन्न छ।
यो विचलन कारण बित्तिकै Diipak Pasvaan नाम गरेका एक भारतीय केटा जन्म रूपमा डाक्टर चिनिन थाले। साँच्चै, यो पहिलो क्षण देखि बच्चा एक दुर्लभ विसंगति (को Siamese जोडाहरू भन्दा पनि अधिक दुर्लभ) छ स्पष्ट थियो। साना केटा को शरीर मा एक परजीवी जुम्ल्याहा विकास भएको थिएन।
हतियार र खुट्टा को दुई जोडी: हामी थाह छ, Diipaka Pasvaana धेरै आठ रूपमा limbs थियो। केही हिन्दूहरू यो पुनर्जन्म भगवान विष्णु कि विश्वास गरे। तथापि, डाक्टर यसलाई गर्भमा जोडाहरू को दुरुपयोग को परिणाम, र अर्को मा निहित सिर्फ एक को फल रूपमा खडा भएको छ कि बस एक विसंगति हो भन्छन्।
दुर्भाग्यवश, तुरुन्तै जन्म पछि बच्चा एकदम गम्भीर सर्जरी को परजीवी जुम्ल्याहा हटाउन गरेको हुन सकेन। यस सन्दर्भमा, केटा स्पाइडर अप सात वर्ष पनि एक सरल एक्स-रे पार गरेनन्। तर, आफ्नो आमाबाबुले परिणाम संग आशा गुमाउनु थिएन, आफ्नो बच्चा अझै सामान्य मानव फारम फिर्ता गरिनेछ। यस पछि त्यहाँ नै राज्य हरेक कारण, रूपमा प्रारम्भिक रूपमा 2005 नाम केटी जन्म भएको थियो छ महालक्ष्मी Tatma, जो एक एकदम समान जन्मजात anomalies थियो। त्यो2वर्षको हुँदा, एक सफल सञ्चालन उनको गरेको थियो।
यो समाचार सुनेपछि आमाबाबुले Diipaka Pasvaana तुरुन्तै यस कठिन कुरा उतरदायित्व लिनु गर्ने एक सर्जन खोज्न थाले। चाँडै एक डाक्टर अप देखाए किनभने र, निकै लामो प्रतीक्षा छैन।
"भारत मा एक केटा जन्म भएको थियो स्पाइडर!" - यो शीर्षक अब मुद्रण मा प्रदर्शित हुनेछ। र यो Diipak Pasvaan एकदम सफलतापूर्वक मा संचालित, र थियो भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
सर्जन को कथा अनुसार, यो बच्चा राम्ररी जांच कहिल्यै छ किनभने, जोडाहरू को जुदाई लागि प्रक्रिया निर्णय गर्न गाह्रो थियो र एक परजीवी जुम्ल्याहा रगत प्रणाली, र केटा, साथै तिनीहरूले एक साधारण शरीर छ वा छैन कि एकताबद्ध कसरी अस्पष्ट छ।
डाक्टर को एक लामो मेडिकल परीक्षा समूह पछि अझै पनि बच्चालाई मा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। तपाईं थाह छ, यस कठिन मामला लागि अनुभवी कर्मचारी देखि बेंगलोर को एक प्रमुख भारतीय शहर मा स्थित छ जो क्लिनिक, आउनुहोस्।
अतिरिक्त हतियार र खुट्टा हटाउन, डाक्टर चार घण्टा भन्दा बढी लिए। र, यो उल्लेख गर्नुपर्छ, डाक्टर जानिजानि अप मामला लिए। को परजीवी जुम्ल्याहा हटाउन सर्जरी सफल भन्दा बढी थियो। र अहिले विचलता शीर्षकहरू "भारत मा एक केटा जन्म भएको थियो स्पाइडर!" मात्र पुरानो समाचार पत्र र पत्रिका मा थिए।
सर्जरी पछि, केटा पूर्ण पुनर्वास गरेकोले। उहाँले समाज को एक पूर्ण सदस्य भए। अब बच्चा सुरक्षित स्कूल हिंड्न र सामान्य जीवन सक्छ।
यो यस्तो एउटा सञ्चालनको खर्च भनेर Diipaka Pasvaana परिवारको बारेमा 80 हजार डलर उल्लेख गर्नुपर्छ। तर डाक्टर मुक्त लागि यो अद्वितीय प्रक्रिया पकड निर्णय गरेका छौं। "यो एउटा दुर्लभ जन्मजात विकार छ। यस्तो विकलांग सबै बच्चाहरु बाँच्न छैन। हामी एक मौका लिए, र सञ्चालन सफल भएको थियो। फलस्वरूप, केटा जान निःशुल्क थियो। अब उहाँले भौतिक विकास "आफ्नो साथीहरूको पछि LAG छैन, - सर्जन Ramcharan Tiagarayan बताए।
व्यक्तिगत पुनर्वास कार्यक्रम: विकास, कार्यान्वयन, नमूना। पुनर्वास को व्यक्तिगत कार्यक्रम र असक्षम को habilitation
10 बिरामी नातेदार हेरचाह तनाव हटाउन कसरी सुझावहरू
असंबादी - यो हुनुहुन्छ? कसरी रोग संग बाँच्न सिक्न?
सुनुवाइ पुनर्स्थापना तरिका रूपमा cochlear प्रत्यारोपण
अशक्त लागि शौचालय: को कुर्सी-शौचालय को प्राविधिक विशेषताहरु
पुन: परीक्षा अशक्तता को। चिकित्सा र सामाजिक विशेषज्ञता
अभिनेता Yevgeny Stychkin: जीवनी, फिलिम क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
HCG: गर्भावस्था को सप्ताह तालिका। Norma hCG गर्भावस्था
के अक्सर यदि टाउको को दाहिने तिर दुख्छ? किन टाउको को दाहिने तिर चोट?
Anomalous क्षेत्र। असामान्य तर्क
के व्हिस्की र अन्य मादक पेय बनाउँछ?
टेनिस: संसारको टूर्नामेंट प्राप्त गर्न कसरी
एकीकरण - विकास मा नयाँ चरण
"मेरो सपना बीच को" अभिनेता। जीवनी र Filmography।
विश्वास वा गर्न: प्रेम को संकेत
को समस्या समाधान मा एक सहायता रूपमा कब्जियत बाट मोमबत्ती
अत्तर Eclat घ Arpege Lanvin अत्तर घर
मात्रा नङ डिजाइन: विशेष रोचक मैनीक्योर विचार र सिफारिसहरू